माधव नेपाल एक्लिदैँ, अन्ततः झलनाथ खनालले पनि छाडे साथ ! - PUBLICAAWAJ
प्रकाशित : मङ्गलबार, साउन २६, २०७८०९:२३ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
काठमाडौँ / एमाले नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहभित्र दुई धार प्रष्ट देखिएको छ । एउटा धार पार्टी एकताको पक्षमा खुलेको छ । अर्को धार नयाँ पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ ।
र, आचार्य वि’वादमा तानिए । त्यसैकारण २९ असारमा नेता खनालले भारतबाट शेरबहादुर देउवाको पक्षमा विज्ञप्ति निकाले । उक्त विज्ञप्ति भीम आचार्य स्वयंले पत्तो पाएनन् ।कसले मस्यौदा गर्यो भन्ने आचार्यले पत्तो नपाउँदै माधव नेपालले स्थायी समितिको गु्रपमा सेयर गरे । नेपालले ग्रुपमा सेयर गर्दा आचार्यसहितको टोली नेपालकै निवासमा थिए ।
आफूलाई थाहा नै नदिई खनालको विज्ञप्ति आएपछि रिसा’एका आचार्यले फन्केर हिँडेका थिए । यो समस्या त्यतिमात्र टुंगिएन । २२ साउनमा नेपाल–खनाल समूहको केन्द्रीय कमिटीको बीचमा स्थायी समिति बैठकमा पनि आचार्यले नेता नेपालको गाली खानुपर्यो ।
आश्चार्य चाहिँ केही महिना यता नेपाल–खनाल समूहका खनालनिकट केही नेताहरु अस्वभाविक रुपमा एकताको पक्षमा उभिएका छन् । ओलीनिकट नेताहरुसँग उनीहरुले अन्तिममा नेपाललाई छोडेर एमालेमा रहनसक्ने बताइरहेका छन् । यो समाचार आजको साँघु साप्ताहिक दैनिकमा छ ।
प्रधानमंत्री ओली भोली भारत प्रस्थान गर्दै, २ राष्ट्रलाई दिइएन निम्तो !
डन्डीकाे मूल्य ४ रुपैयाँ घटाउन फलामे छड उत्पादक संघको निर्देशन
कानुनी शून्यता हटाउन संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी
पिता साहरुखसँग ‘पठान’को सुटिङमा व्यस्त आर्यन ड्रग्स पार्टीमा कसरी पुगे ?
अर्थ मन्त्रालयमा भोगिरहेको समस्या र अनुभव